UPDATE: Dowladda Jarmalka oo diiday in Mareykanka uu cunaqabateeyo dalka Ciraaq | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Dowladda Jarmalka oo diiday in Mareykanka uu cunaqabateeyo dalka Ciraaq
Berlin (Halqaran.com) – Dowladda Jarmalka ayaa si weyn uga soo horjeesatay hanjabadaha iyo cunaqabateennada ee Mareykanku ugu goodiyay dalka Ciraaq.
‘‘Hanjabaadaha iyo cunaqabateennada ka dhanka ah dalka Ciraaq ma ahan mid sax ah‘‘, Wasiirka Arrimaha Dibadda Jarmalka Heiko Maas ayaa sidaas yiri, xilli uuTrump ugu goodiyay Baqdaad in uu saari doono cunaqabateyn aysan waligood arkin haddii ay ku adkeystaan in ciidamada Mareykanku ka baxaan dalkooda.
“Ma u maleynayo in Ciraaq sidaas wax looga dhaadhicin karo” ayuu yiri Heiko, mar uu u warramayey Idaacadda Deutschlandfunk.
Heiko Maas ayaa intaasi ku daray in Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan heshiiska Niyuukleerka Iiraan isla toddobaadkanna ay u jawaabi doonaan Iiraan.
Iiraan ayaa Axaddii sheegtay in ay ka laabaneyso dhammaan heshiisyadii ku aaddanaa horumarinta niyuukleerka ee la gaaray 2015-kii, kaas oo u dhaxeeyay Iiraan iyo lixda quwadood ee waaweyn.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jarmalka Heiko Maas